Mara Mma Jiri Gị, Ngosipụta na IP | Martech Zone
N'ụtụtụ a, anatara m akwụkwọ ozi sitere n'aka ụlọ ọrụ anyị dere banyere ya. Email ahụ siri ike na-achọ ka anyị wepụ ihe ọ bụla gbasara aha ụlọ ọrụ ụghalaahịa na post anyị ma tụọ aro ka anyị jikọta saịtị ha na-eji ahịrịokwu kama.
Trademark Fair Iji
Ana m eche na ụlọ ọrụ nwere ike ịbụ na ihe ịga nke ọma n’oge gara aga na-emegharị ndị mmadụ iji wepụ aha ma gbakwunye ahịrịokwu ahụ - ọ bụ atụmatụ SEO iji mee ka ha nọrọ ma belata ogo anyị maka aha ụlọ ọrụ ha. Ọ bụkwa ihe nzuzu na ọchị, na-eme ka m chee echiche banyere ụlọ ọrụ ma ọlị.
Echetara m onye ahụ sitere na ụlọ ọrụ ahụ na m na-eji aha ha eme ihe n'ụzọ ziri ezi ma ghara iji ya ree ngwongwo m ma anyị anaghị eji ya dị ka nkwenye. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ ọ bụla nwere akara ụghalaahịa ma ọ nweghị ihe kpatara na ịgaghị eji aha ụlọ ọrụ ndị ahụ ede. Nke a bụ ihe Nchịkwa Electronic Frontier Foundation kwuru, sị:
Ọ bụ ezie na iwu ụghalaahịa na-egbochi gị iji ụghalaahịa nke onye ọzọ iji ree ngwaahịa gị na-asọmpi (ị nweghị ike ịme ma ree elekere "Rolex" nke gị ma ọ bụ kpọọ blọọgụ gị "Newsweek"), ọ naghị egbochi gị iji akara ụghalaahịa iji zoo aka nye onye nwe akara ma ọ bụ ngwaahịa ya (na-enye ọrụ ndozi maka nche Rolex ma ọ bụ na-akatọ mkpebi nchịkọta akụkọ nke Newsweek). Ofdị ojiji ahụ, nke a maara dị ka "iji aha ọma egosipụta," ka enyere ma ọ bụrụ na iji ụghalaahịa ahụ dị mkpa iji chọpụta ngwaahịa, ọrụ, ma ọ bụ ụlọ ọrụ ị na-ekwu maka ya, na ị naghị eji akara ahụ iji gosi ụlọ ọrụ ahụ nkwado gị . Na mkpokọta, nke a pụtara na ị nwere ike iji aha ụlọ ọrụ na nyocha gị ka ndị mmadụ mara ụlọ ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa ị na-eme mkpesa. Nwere ike iji ụghalaahịa ahụ na ngalaba aha (dị ka walmartsucks.com), ọ bụrụhaala na o doro anya na ị naghị ekwu na ọ bụ ma ọ bụ na-ekwu maka ụlọ ọrụ ahụ.
Nwebisiinka Ikike Nwebisi
Ọ dị mkpa iburu n'uche na iji ihe eji eme ihe n'ụzọ zuru oke na ihe nwebisiinka. Anyị na-ajụ ndị mmadụ n'otu n'otu na ụlọ ọrụ ndị na-ebipụtaghachi ọdịnaya anyị n'ozuzu ya iji wepụ ọdịnaya anyị oge niile. Akwụkwọ ndị ọzọ, dị ka Social Media Taa, nwere ikikere iji bipụta ọdịnaya ahụ. Ezi ojiji dị nnọọ iche. Dị ka Nchịkwa Electronic Frontier Foundation:
Nkwuputa nkpirisi ga-abụ ihe eji eme ihe n'ụzọ ziri ezi, ọ bụghị mmebi iwu nwebisiinka. Iwu nwebisiinka na-ekwu na "iji mma eme ihe purposes maka ebumnuche dịka nkatọ, ikwu okwu, ịkọ akụkọ, izi ihe (gụnyere ọtụtụ akwụkwọ maka iji klaasị), agụmakwụkwọ, ma ọ bụ nyocha, abụghị ịda iwu nke ikike nwebisiinka." Yabụ ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu ma ọ bụ na-akatọ ihe onye ọzọ dere, ị nwere ikike iji ya kwupụta. Iwu kwadoro "mgbanwe" iji - nkọwa, ma ọ bụ otuto ma ọ bụ nkatọ, dị mma karịa nnomi nnomi - mana ụlọ ikpe kwuru na ọbụlagodi itinye mpempe ọrụ dị ugbu a na ọnọdụ ọhụrụ (dịka thumbnail na injin ọchụchọ ihe oyiyi) dị mkpa dị ka “mgbanwe.” Onye edemede blọgụ ahụ nwekwara ike inye gị ikike karịa mmesapụ aka karịa site na ikikere Creative Commons, yabụ ị kwesịrị ịlele maka nke ahụ.
Nkwenye na Ngosiputa
Companylọ ọrụ ahụ rịọkwara ka m tinye usoro ngosi ngosi dịka nke weebụsaịtị. N'ezie echeghị m arịrịọ a. Mgbe anyị usoro nke ọrụ na amụma nzuzo a kwadoro ya ma gosipụta mmekọrịta ọ bụla nke anyị, inwe iwu ngosi ngosi iwu dị ka ezigbo mgbakwunye, yabụ anyị gbakwunyere a ngosi Peeji iji setịpụ atụmanya ka mma banyere otu esi akwụ anyị ụgwọ maka nkwado, mgbasa ozi ọkọlọtọ na mgbakwunye mmekọ.
M chetaara ụlọ ọrụ ahụ na anaghị anabata saịtị iwu ngosi Federal Trade Commission (US) ya mere, ebe achọrọ ikpughe, achọrọ inwe iwu anaghị adị mkpa ma ọ bụ nyere aka. Anyị na-atụ anya FTC ka o doo anya ka ndị mmadụ na-egosipụta tweets, mmelite ọkwa na blọgụ n'ọdịnihu. Otu ụlọ ọrụ na-ebute ụzọ na nke a bụ MMP.LY - ndị wuru ngwa iji mepụta, soro na ịkọwapụta nkwupụta maka nnukwu ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-achịkwa nke ọma.
A njikọ ihe bụ mmekọrịta dị n'etiti onye na-ere ahịa na onye nwere ike ịmetụta ihe dị arọ ma ọ bụ ntụkwasị obi nke ndị na-azụ ahịa nyere nkwado nke onye ebugharị. Perkins Coie
M hapụrụ ụlọ ọrụ ahụ mara na ọ bụrụ na ha nwere nsogbu ọ bụla na post m na njikọ njikọ njikọ, anyị nwere ike ịkwụsị mmekọrịta ahụ ozugbo. Agaghị m ekwe ka ụlọ ọrụ mee ka m gbanwee ụzọ m si ede ma kesaa posts ka ha wee nwee ike ịbara uru karịa. Nke a bụ blog m, ọ bụghị nke ha. Ha laghachitere azụ ma enwere m obi ike na ha agaghị alaghachi - agaghị m ede banyere ha ọzọ.
ngosi: Nyochaa onye ọka iwu gị ugboro abụọ na ihe a, m ga-agbakwa gị ume ka ị bụrụ onye na-akwado Electron Frontier Foundation.
Tags: cmp.lynnabatanwebisiinkanwebisiinka ngosi ihe eji eme ihengosieffntọala ala eletrọnikingosi ojijiụlọ ọrụ gọọmentị etitingosi ngosiamụma nzuzousoro nke ọrụedenyereụghalaahịa ojiji
A Nseta nke Omnichannel Consumer yingzụ Àgwà
Nov 14, 2013 na 7:43 AM
Nnọọ aka, Maazị Karr. Ozi dị oke egwu maka ndị na-ede blọgụ na ndị ọzọ.